Ixesha kunye nabahlobo 3
Kwileta eyamkelwe kutshanje, umhlobo ubuza: Kutheni kungcono ukuba umzimba uphelelwe emva kokufa endaweni yokuba ungcwatywe?
Zininzi izizathu eziphambili zokuxhasa ukutshiswa kwesidumbu. Phakathi kwazo enye yokutshiswa kwesidumbu icocekile, icocekile ngakumbi, ifuna igumbi elincinci, kwaye kungabikho zizifo, njengezihlala zivela emangcwabeni, phakathi kwabaphilayo. Kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba i-Theosophists ihamba phambili, oko kukuthi, ukufa kukudlula kwimigaqo ephezulu, kwaye kuthetha ukushiya umzimba kwindlu engenanto. Emva kokuba umphefumlo womntu uzikhuphele ngaphandle kwiintsalela, kukho umzimba oshiyekileyo, owanikezela kwaye wagcina ukwimo yomzimba, kunye nomnqweno womzimba. I-astral okanye ifomu yomzimba ilayite ijikeleze, kwaye ihlale ithuba elide, lokomzimba, liphela njengoko ukubola komzimba. Umzimba womnqweno, nangona kunjalo, amandla asebenzayo anokwenza umonakalo ngokuchanekileyo njengoko iminqweno yayikhohlakele okanye inimical ebomini. Lo mnqweno womnqweno unokuhlala iminyaka engamakhulu eminyaka ukuba iminqweno yawo uyakhiwa womelele ngokwaneleyo, ngelixa umzimba wenyama uhlala iminyaka embalwa ngokuthelekiswa. Lo mzimba unqwenelekayo yi-vampire etsala amandla ayo, okokuqala ukusuka kwiintsalela kwaye okwesibini kuwo nawuphi na umzimba ophilayo oya kuwunika abaphulaphuli, okanye bavume ubukho bayo. Umzimba womnqweno utsala ukondla kwifomu efileyo kunye nomzimba we-astral, kodwa ukuba umzimba wenyama uyokutshiswa othintela konke okuthethwe kwangaphambili. Oko kutshabalalisa amandla omzimba wenyama, ukwahlula umzimba wawo we-astral, kuxazulula ezi zinto zisuswayo kwangaphambi kokuba zizalwe kwaye ngelixa zihlala emhlabeni, kwaye kwenza ukuba ingqondo ikwazi ukuzikhulula ngokulula kumzimba womnqweno kwaye idlulele ukuphumla abathi iinkolo babize izulu. Asinako ukwenza inkonzo enkulu kwabo sibathandayo nabasweleyo kobu bomi kunokuthi imizimba yabo itshiswe kwaye ke oko kubakhulula kwimfuneko yokuxhoma i-coil yabantu kunye nezinto ezoyikisayo ezingcwabeni.
Siphila kwixesha eliqhelekileyo kakhulu kwisayensi ukuze kuvumeleke ukuba kubekho nayiphi na inyani kwiintsomi zoncwadi lweendaba ezinjengeeVampires. Kodwa, nangona kunjalo, inyani isekhona, kwaye uninzi lwezenzululwazi, esele luphile iminyaka yeenkolelo, baye banenkolelo ngakumbi kunolona lubalaseleyo xa benamava nge-vampire; ke yayilixesha labo lokuba bafumane ukungcikivwa kunye nokuhlazwa koososayensi abangoogxa babo. Elinye ithuba lokuxhaphaka kakhulu kwezinto ezibonakalayo ngokubhekisele kwizinto ezifumaneka kwindawo engaphantsi kwendalo kunye neyona nto iphambili ebomini, kukuba kuthatha ingcinga edumileyo kude neentsomi ze-goblins, ghouls, kunye ne-vampires, ngokuhlekisa ngezinto ezinjalo. Ke ngoko akukho vampirism iphantsi kuneyo kumaXesha Aphakathi xa wonke umntu ekholelwa kubugqwirha nakubugqwirha. Iimbaleki zisekhona kwaye ziya kuqhubeka zenziwa kwaye zigcinwe ziphila logama nje abantu bephila ubomi obucekeceke, apho bahlala khona ukucinga kunye nomnqweno Bulala iintshaba zabo, baphange amahlwempu, kwaye bangenanto, bonakalisa ubomi babahlobo babo, kwaye babingelela abanye kwiminqweno yabo yokuzingca. Xa umntu oneminqweno enamandla kunye nengqondo enesazela esineempawu ezifihlakeleyo okanye ezixineneyo, ephila ubomi bokuzingca, engenabubele kwabanye xa iminqweno yakhe ichaphazelekayo, uthatha lonke ithuba elifumanekayo kwishishini, etyeshela umbono wokuziphatha, kwaye ethobela abanye iminqweno yakhe ngandlela zonke ezinokufunyanwa kukuqonda kwengqondo yakhe: xa ke ixesha lokufa kwendoda enjalo lifikile emva koko kusweleke oko kubizwa ngokuba ngumzimba womnqweno, amandla kunye namandla afihlakeleyo. Oku kwahluke ngokupheleleyo kwifom ye-astral ejikelezayo xa usiya emzimbeni. Umzimba onomnqweno onjalo unamandla kunowomntu ophakathi kwaye unamandla ngakumbi, kuba iingcinga ngelixa ebomini zazigxile kwiminqweno. Lo mzimba womnqweno ke uyintsingiselo kuba uthabathela kubo bonke abantu abaya kuvula umnyango ngobomi, iingcinga, kunye neminqweno, kwaye nababuthathaka ngokwaneleyo ekuvumeleni i-vampire ukuba yoyise ukuqonda kwabo. Amabali awothusayo anokubaliswa ngamava abantu abaninzi ababengamaxhoba e-vampire. Umzimba walawo afana nokuphila ubomi be-vampire uhlala ufunyanwa utsha, ucocekile, kwaye inyama iyakube ishushu iminyaka emva kokuba sele engcwabeni. Oku kuthetha ukuba umzimba womnqweno ngamanye amaxesha womelele ngokwaneleyo ukunxibelelana ngokwasemzimbeni ngomzimba we-astral, kunye nokugcina ubume bendawo ebonakalayo, ngokuphila buhanjiswa bubomi obuvela kwimizimba yabantu ephilayo yi-vampire okanye Umnqweno womzimba. Ukutshiswa komzimba ngokutshisa umzimba kuyawuphelisa amandla okuba umzimba womntu ulondoloze umzimba wawo wobomi. Umzimba womntu, kanye njengoko ugcina amanzi okanye indlu yokugcina izinto, utshatyalalisiwe kwaye umzimba womnqweno awukwazi nokuba uthabathe ubomi babaphilayo kwangoko kwaye uthintelwe ukuba ungasondeli kangako kubo.
Xa umphefumlo ungene ebomini, unesifundo esichaziweyo esisifundayo, ekufundeni kwaso esinokuthi siphume ukuba sinqwenela. Ithuba lokufunda isifundo sobomi obuthile, linokuba yiminyaka embalwa okanye landiswe ngaphezulu kwekhulu, okanye isifundo asinakufundwa konke konke; kwaye umphefumlo ubuyela esikolweni uphinda-phinda ude ufunde eso sifundo. Omnye unokufunda ngakumbi kwiminyaka engamashumi amabini anesihlanu kunokuba omnye afunde kwikhulu. Ubomi kwihlabathi ngenjongo yokuba bafumane ulwazi olunzulu malunga nobunyani obungenasiphelo. Ubomi nganye kufuneka iphakamise umphefumlo kwinqanaba elinye kufutshane nolwazi lwakho. Oko kudla ngokubizwa ngokuba yengozi kukuqhutywa kweenkcukacha zomthetho ngokubanzi. Ingozi okanye eyenzekileyo yinye kuphela i-arch encinci yomjikelezo wesenzo. Ingozi eyaziwayo okanye ebonwe, kukuqhubeka kunye nokugqitywa kwesizathu sokungabonakali. Nangona kusenokuba njalo, iingozi phantse zihlala zibangelwa ziingcamango umntu azivelisayo. Ukucinga, isenzo, kunye nengozi zenza umjikelo opheleleyo wesiphumo kunye nesiphumo. Leyo nxalenye yomjikelezo wesizathu kunye nesiphumo esidibanisa unobangela nesiphumo isenzo, esibonakalayo okanye esingabonakaliyo; kwaye loo nxalenye yomjikelezo wesizathu kunye nesiphumo esisiphumo kunye nesiphumo seso, yingozi okanye eyenzekayo. Yonke ingozi inokubhaqwa ibangelwa. Ukuba sifumana oyena nobangela wayo nayiphi na ingozi, sithetha nje ukuba unobangela uvelisiwe, oko kuthetha ukuba kuphela ngumjikelo omncinci wokucinga, isenzo, kunye nesiphumo, esikutshanje; Kodwa xa ingozi okanye isiphumo simi sodwa kwaye umntu engakwazi ukuyibona ngoko nangoko into eyandulelwe sisizathu, oku kuthetha ukuba umjikelo wokucinga awuyiyo umjikelo omncinci, kwaye ke kutsha nje, kodwa uyandiselwa kumjikelezo omkhulu, ukucinga kunye nokusebenza okunokufunyanwa kubomi bangaphambili okanye nabuphi na ubomi bangaphambili.
Lo mbuzo unokubonakala ubuzwa kwingcamango yokuba umzimba we-astral awukho, ngokungathi ikhona into enjalo unokuphinda uvelise naliphi na ilungu lomzimba xa elahlekile, ngakumbi njengoko ibangwa ngabo bonke ooTheosophists ukuba into yomzimba yakhiwe emzimbeni womntu ngokuya Uyilo lwangaphakathi okanye lomzimba we-astral. Kodwa ke inkcazo ilula kakhulu. Kufanele ukuba kubekho isithuba esibonakalayo apho umbandela womzimba uguqulwa ube yinto yomzimba kwaye kufuneka ubekhona nomzimba kwilungu ngalinye lesakhiwo eliza kusebenza kuso. Indlela ephakathi yokwenyama ligazi, apho ukutya kuguqulwa ube ngumzimba. I-linga sharira yimolekyuli kwisakhiwo, ngelixa umzimba wenyama udityaniswa nezicubu zeselula. Ngoku nangona ingalo ye-astral ingahlali ithungwe xa ilungu lomzimba lisikiwe, akukho sithuba sangaphakathi apho into yomzimba inokuthi idityaniswe kwaye yakhelwe kwizinto zomzimba. Ke ngoko, nangona ingalo ye-astral ikhona, ayikwazi ukuwuhambisa ngokwawo umbandela ngokwawo kuba akusekho sithuba sokwenyama sokudlulisela umba wenyama. Ke iqabane le-moleral ye-moleral yengalo yomzimba yeselula ekhutshiweyo ayinandlela yakwenza into ngokwayo. Okona kunokwenziwa kukwakha izicubu ezitsha kwisiphelo sesiqu kwaye ke ukuvala inxeba. Oku kuyakucacisa indlela amanxeba aphiliswa ngayo, kwaye kutheni amabala anzulu esala ukuba inyama ayizange idityaniswe ngokwaneleyo ukuze ithambe ukuze incamathele.